नासाले गर्‍यो अन्तरिक्षमा अनौठो सोनिफिकेसन प्रोजेक्ट
ब्रह्माण्डमा आकाशगंगाबाट निस्कने प्रकाशलाई अब सुन्न सकिने भएको छ । उक्त ध्वनि सुन्न मात्र नभएर त्यसलाई बुझ्न पनि सकिने नासाले बताएको छ ।
हामीले सुन्ने आवाज भने आकाशगंगाको प्रकाशमा भर पर्दछ । जति प्रकाश हुन्छ, ध्वनिमा पनि त्यति नै आवाज आउँछ । अर्थात् धेरै प्रकाश भएमा आवाजमा बढी आउने र थोरै प्रकाश भएमा कम आवाज आउने हुन्छ । यस प्रकारको प्रविधिलाई सोनिफिकेशन भनिन्छ । यो डाटालाई ध्वनिमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो ।
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले यो परियोजनालाई सुरू गरेको छ । यो प्रोजेक्टको मद्दतले मानिसहरू पहिलोपटक आकाशगंगालाई सुन्न सक्नेछन् ।
?Listen to the Pillars of Creation?
यसको बारेमा नासाले ट्विटरमा भिडियो सेयर पनि गरेको छ । भिडियोमा आकाशगंगाको तस्वीरमा ध्वनि बायाँबाट दायाँतर्फ गएको देख्न सकिन्छ । आवाजबाट कहाँ धेरै प्रकाश छ भने पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।
भिडियोमा धेरैजसो उज्यालो भएको ठाँउबाट ठूलो र कम उज्यालो भएको ठाँउबाट सानो प्रकाशको आवाज आएको पनि देख्न सकिनेछ । नासाका अनुसार प्रयोगकर्ताहरु ४०० प्रकाश वर्ष टाढाबाट खिचिएको तस्वीरहरुबाट मात्र आवाज सुन्न सकिने बताएको छ ।
चन्द्र एक्स–रे वेधशाला, हब्बल टेलिस्कोप र स्पिट्जर टेलिस्कोपबाट फोटोहरू खिचिएका थिए । त्यस्तै फरक फरक आकाशगंगाको तस्बिरबाट फरकफरक प्रकारका आवाज आउने पनि नासाले जनाएको छ ।
के हो आकाशगंगा ?
सजिलो भाषामा आकाशगंगा के हो भनेर बुझ्नका लागि हामी पृथ्वीमा बस्छौं, यो एउटा ग्रह हो । त्यस्तै अन्य सबै ग्रहहरू पनि सौर्यमण्डलको एक हिस्सा हुन् । आकाशगंगा पनि सौर्यमण्डलको एउटा सानो अंश हो । आकाशगंगा धेरै प्रकारका ग्यास, अर्वौं ग्रह, सौर्य प्रणाली र धुलो मिलेर बनेको हुन्छ ।
आकाशगंगाकोे बीचमा एउटा धेरै ठूलो प्वाल छ, जसलाई वैज्ञानिकहरुले ब्ल्याक होल भन्ने गरेका छन् ।
कला र विज्ञानको मिलन
नासाले आकाशंगगाको उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि यतिबेला यसको चर्चा भएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई अद्भुत प्रविधि भनेका छन् । उनीहरुले यसलाई अनौठो मान्दै कला र विज्ञानको बेजोड समिश्रण भन्दै प्रचार पनि गरिरहेका छन् । आकाशगंगाको प्रकाशलाई आवाजमा परिवर्तन गरेर नासाले फेरि एकपटक सबैलाई चकित बनाउने काम गरेको छ ।
आकाशगंगाको दोस्रो तस्वीरको अवाज
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ९, २०७७ २०:१५